WINDOWS ကို 10 ရက်နေ့တွင်အဆိုပါ TERMINAL နှင့်ဆာဗာ - WINDOWS ကို - 2019
Terminal နှင့်ဆာဗာအတွက်က Windows 10 ရက်နေ့တွင်သင့်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပါ
ကို default operating system ကို Windows 10 ကိုမျိုးစုံအသုံးပြုသူများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုတည်းကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုမထားဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ် ပို. ပို. မကြာခဏဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့အပြင်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအဝေးမှလုပ်ကိုင်ဖို့သာသက်ဆိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းပုဂ္ဂလိကရည်ရွယ်ချက်။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျကို Windows 10 မှာ Terminal နှင့်ဆာဗာကို configure နှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
Setup ကိုလမ်းညွှန် 10 ဦးကို Windows Terminal နှင့်ဆာဗာ
အဘယ်သူမျှမကိစ္စပြဿနာဆောင်းပါး၏ဘာသာရပ်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမထင်ခဲ့ဘူးမည်မျှခက်ခဲပထမတစ်ချက်မှာပြုလုပ်ရုံညစ်ညမ်းသောမှအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ တင်းကြပ်စွာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာမှ - သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်။ အဆိုပါ OS ကို၏အစောပိုင်းဗားရှင်းအတွက်ဆင်တူတဲ့ connection ကိုနည်းလမ်းသတိပြုပါ။
အသေးစိတ်: Windows7ကိုအပေါ်တစ်ဦး Terminal နှင့်ဆာဗာ Creating
အဆင့် 1: အထူးပြု software ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ကျွန်တော်အရင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Windows 10 ကိုရဲ့ standard ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံမျိုးစုံကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးစနစ်၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုမထားဘူး။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကွန်နက်ရှင်ကြိုးစားတဲ့အခါ, သငျသညျအောကျပါအရုပ်ပုံမြင်ရပါလိမ့်မည်:
ဒီကို fix စေရန်, သင် operation parameters တွေကိုအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်တို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုပြုလိမ့်မည်ကြောင်းအထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုလည်းမရှိ။ ထိုခဏခြင်းတွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးကြမည်သည့်ဖိုင်များ, system ကိုဒေတာပြုပြင်မွမ်းမံကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ ဤကိစ်စတှငျအခြို့သောကိစ္စများတွင်, သူတို့က Windows အတွက်အန္တရာယ်အရှိဆုံးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကိုအသုံးချသို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ် - သင်မှတက်ပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ခြေလှမ်းများပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။ အောက်ပါပြုအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးစတင်ပါရဲ့ကြစို့:
ဒီ link ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, ထို့နောက်အောက်ကပုံတွင်ညွှန်ပြသောလိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ။
ရလဒ်အဖြစ်တစ်ခု archive ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လိုအပ်သော software ကိုမှဒေါင်းလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုဒ်မဆိုအဆင်ပြေရာအရပျဖို့အားလုံးကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လျက်, လက်ခံရရှိခဲ့သောဖိုင်တွေကြားတွင်ရှာတွေ့ဟုခေါ်သည်ပြီးတာနဲ့ "Install"။ စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ကို run ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနဲ့နာမည်တူ၏ပေါ့ပ်အပ် menu ကို line ကနေ select လုပ်ပါ။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, စနစ်ဟာ executable file ၏ထုတ်ဝေသူဆုံးဖြတ်သည်, ဒါကြောင့် built အလုပ်လုပ်နိုင် "ဒီ Windows Defender"။ သူကရိုးရှင်းစွာဤအကြောင်းကိုသငျသညျသတိပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆက်သွားဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Run ကို".
သင် screen ပေါ်မှာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး profile များကိုဖွင့်ထားသော်လည်း အကယ်. လျှောက်လွှာကို run ဖို့သတိပေးခံရစေခြင်းငှါ "Prompt ကိုဆင့်ဆို"။ ဒါဟာလည်းမရှိ, installation ကို run ပါလိမ့်မယ်။ pop-up window ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Yes" ကို.
Next ကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "Prompt ကိုဆင့်ဆို" အလိုအလျောက် module တွေ၏ installation ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သာသင်မည်သည့် Key ကိုနှိပ်ဖို့တောင်းသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာအလိုအလျောက် installation ကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ကသာမဆိုအပြောင်းအလဲများကိုအတည်ပြုရန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, Extract files များ၏စာရင်းကိုရှာဖွေ "RDPConf" ထိုသို့ run ။
အကောင်းဆုံးကတော့ကျနော်တို့ကအောက်ပါပုံရိပ်မှာမှတ်ချက်ချခဲ့ကြသမျှသောအချက်များအစိမ်းရောင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကအားလုံးပြောင်းလဲမှုများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြပြီနဲ့စနစ်မျိုးစုံအသုံးပြုသူများကို connect လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုသည်။
၌ဤပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခု terminal ကို server ကိုဖွင့် setting များအတွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ မျှော်လင့်, သင်ပြဿနာများရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အပေါ် Moving ။
အဆင့် 2: OS ကိုဆက်တင်နှင့်ပရိုဖိုင်းများအတွက် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်
ယခုတွင်သင်သည်အခြားအသုံးပြုသူများလိုအပ်သောကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အောက်တွင် profile များကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်အချို့သော system setting များကိုဖြစ်စေမည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ရပ်များ၏စာရင်းသည်:
ခလုတ်နှင့်အတူ Desktop ပေါ်မှာကလစ်နှိပ်ပါ "Windows ကို" နှင့် "ငါ"။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ကို Windows 10 အထွေထွေ Settings ဝင်းဒိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်။
အုပ်စု Go "Accounts ကို".
အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် (လက်ဝဲ) panel တွင်အခန်းကိုသွားပါ "ဒီမိသားစုနှင့်အခြားလူ"။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီကွန်ပျူတာများအတွက်အသုံးပြုသူ Add" အနည်းငယ်ညာဘက်။
တစ်ဦးက window ကိုကို Windows ရဲ့ login parameters တွေကိုနှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုတည်းလိုင်းအတွက်ဘာမှ Enter မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ရုံတံဆိပ်ကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ် "ငါသည် '' အဲဒီလူကိုရိုက်ထည့်ရန်မဒေတာများ.
Next ကိုသင်လိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် "တစ်ဦးကို Microsoft အကောင့်မရှိဘဲအသုံးပြုသူ Add".
အခုတော့သစ်ကိုပရိုဖိုင်း၏အမည်နှင့်ကသော့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမလွဲမသွေမပါဘဲထဲသို့ဝင်ရပါမည်ဆိုတာသတိရပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အနာဂတျမှာကွန်ပျူတာတစ်ခုဆီသို့အဝေးမှဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများရှိနိုင်ပါသည်။ အားလုံးသည်အခြားလယ်ကွက်ကိုဖြည့ရပါမည်။ ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလက်စသတ်သောအခါ, ခလုတ်ကိုကိုတိုက်တွန်း "Next ကို".
အခုတော့ရဲ့ operating system ကို setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရွှေ့ကြကုန်အံ့။ desktop ပေါ်မှာ icon ပေါ်မှာဒီလိုလုပ်ဖို့ "ဒီကွန်ပျူတာ" ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဆက်စပ် menu ကို option ကိုကနေကို Select လုပ်ပါ "Properties ကို".
ဖွင့်လှစ်သောနောက်တစ်နေ့ window တွင်အောက်ပါသိသိသာသာလိုင်းပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
အခန်းကို Go "Remote Access ကို"။ အောက်တွင်သင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ရသော parameters တွေကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ 'check box' ကို Enable "ဒီကွန်ပျူတာကို Remote ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးဆက်သွယ်မှု Allow"ထိုအခါ option ကိုသက်ဝင်စေ "ဒီကွန်ပျူတာကိုဝေးလံသောဆက်သွယ်မှုများကို Allow"။ ကိုလက်စသတ်သောအခါ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ '' ကို Select လုပ်ပါအသုံးပြုသူများသည် ''.
အသစ်ကပြတင်းပေါက်မှာသေးငယ်တဲ့များ၏ function ကို select လုပ်ပါ "Add".
ထိုအခါသင်သည်စနစ်တစ်ဝေးလံခေါင်သီ access ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောအသုံးပြုသူတစ်ဦးအမည်, မှတ်ပုံတင်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာအနိမ့်လယ်ပြင်၌ပြုသောအမှုရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပရိုဖိုင်အမည်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် button ကို click "အမည်များ Check"ဘယ်လက်ျာရန်ဖြစ်ပါသည်။
ရလဒ်အဖြစ်, သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်အသွင်ပြောင်းမည်ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပြီး profile များကိုစာရင်းမှာတွေ့ရှိထားပြီးဆိုလိုသည်။ စစ်ဆင်ရေး, စာနယ်ဇင်းဖြည့်စွက်ရန် "အိုကေ".
အားလုံးပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်ပြောင်းလဲမှုများ Apply ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့အပျေါမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ" သို့မဟုတ် "Apply"။ ဒါဟာအတော်လေးနည်းနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။
Step 3: ဝေးလံသောကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်နေ
terminal ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းကိုအင်တာနက်ကတဆင့်ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုသူများကို connect တံ့သောရန်စနစ်၏လိပ်စာအထဲကရှာတွေ့ဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုသည်။ Make ကမခက်ခဲသည်:
ပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက် "Options ကို" Windows ကို 10, သော့ကို အသုံးပြု. "ကို Windows + I ကို" သို့မဟုတ် menu ကို "Start"။ System ကို Preferences ကိုခုနှစ်, အပိုင်းကိုသွား "ကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်".
သင်တစ်ဦး line ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ဖွင့်လှစ်သော window ၏ညာဘက်ခြမ်းနှင့်အတူ "ဆက်သွယ်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုပြောင်း"။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက်တစ်နေ့စာမျက်နှာကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါငျးတို့သရရှိနိုင်ပါအချက်အလက်ကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကွန်ယက်ဂုဏ်သတ္တိများကိုတွေ့မြင်သည်အထိတိုင်အောင်အဆင်းသွားပါ။ ပုံရိပ်ပေါ်မှတ်သားလိုင်းများဆန့်ကျင်ဘက်နေသောနံပါတ်များ, အလွတ်ကျက်:
ကျနော်တို့လက်ခံရရှိအားလုံးလိုအပ်သောဒေတာ။ ကျနော်တို့သာ created terminal ကိုမှဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သငျသညျကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်သည့်အနေဖြင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေခံရဖို့နောက်ထပ်လုပ်ရပ်တွေကို။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Start"။ လျှောက်လွှာစာရင်းကိုခုနှစ်, ဖိုင်တွဲနေရာချထား "စံ-Windows ကို" ထိုသို့ဖွင့်လှစ်။ ဖြစ်ဒြပ်စင်များ၏စာရင်း "တစ်ဦး Remote Desktop ချိတ်ဆက်ခြင်း", အကို run ရန်သူ၏လိုအပ်ပါဘူး။
ထို့နောက်နောက်ဝင်းဒိုးထဲမှာသင်ယခင်ကလေ့လာသင်ယူသော IP address ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အဆုံးကလစ်မှာ "ချိတ်ဆက်ပါ".
စံ logon ကို Windows 10 နှင့်ဝသကဲ့သို့, သင် account တစ်ခုပေါ်မှာ user name နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရပါမည်။ ဒီအဆင့်မှာသငျသညျကိုသင်တို့ရှေ့မှာဝေးလံခေါင်သီချိတ်ဆက်မှုအတွက်ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီသောပရိုဖိုင်းကို၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အချို့ကိစ္စများတွင်, သင်ကိုလည်းစနစ်ဝေးလံသောကွန်ပျူတာ၏လက်မှတ်ရဲ့စစ်မှန်မှုကိုအတည်ပြုရန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်းသတိထားမိပေမည်။ ဒီဖြစ်ပျက်လျှင်, ခလုတ်ကိုနှိပ် "Yes" ကို။ ဒါဟာသင်ချိတ်ဆက်ရန်ကွန်ပျူတာအရာမှသေချာလျှင်သာပြုရပါမည်မှန်သည်။
ဝေးလံခေါင်ဖျားဆက်သွယ်မှုစနစ်အားကို boot သည်အထိသာစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံး terminal ကိုဆာဗာချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသင်ဆန္ဒရှိလျှင်ပြောင်းလဲသွားတယ်နိုင်ရွေးချယ်မှုစံသတ်မှတ်ချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတော့ကွန်နက်ရှင်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ရပါမည်, သင် desktop ပေါ်မှာပုံရိပ်မြင်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာထဲမှာ, ဒီတူ:
ဒါဟာအားလုံးကြှနျုပျတို့သညျဤခေါင်းစဉ်အောက်တွင်သင်ပြောပြချင်ခဲ့တယ်အဘယ်သို့သောအကြောင်းပါပဲ။ အထက်ပါအဆင့်များပြုမိပြီးမှ, သင်အလွယ်တကူသင်၏အလုပ်ကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အဝေးမှနီးပါးကနေမဆိုကိရိယာကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်အခက်အခဲများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုကြုံတွေ့ရပါကကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်သီးခြားဆောင်းပါးနှင့်အတူစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ:
အသေးစိတ်: တစ်ဝေးလံခေါင်သီ PC ကိုချိတ်ဆက်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်း